ओलीकै पक्षमा उभिने भए यी बिपक्षि नेता , दाहाल-नेपाल मिल्दा पनि संसदमा ओलीकै बहुमत ! - Rising Dainik
ओलीकै पक्षमा उभिने भए यी बिपक्षि नेता , दाहाल-नेपाल मिल्दा पनि संसदमा ओलीकै बहुमत !
April 7, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on ओलीकै पक्षमा उभिने भए यी बिपक्षि नेता , दाहाल-नेपाल मिल्दा पनि संसदमा ओलीकै बहुमत !
काठमाडौँ / नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिए पछि पनि एमाले भित्रै ओलीको बिरोध भैरहेको छ तर विभिन्न कारणले गर्दा बिपक्षि बाट भने साथ्नि पाई रहेका छन्।
संसद पुनर्स्थापना पछि ओलीले राजिनामा दिने सहज आकलन गरेका प्रचण्डले राजिनामा नदिए पछि अबिश्वाशको प्रस्ताव ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् तर बिपक्षी दलका नेताहरुले ओलीलाई साथ दिदा सफल हुन सकेका छैनन् ।
माधव नेपाल र प्रचण्डले ओलीलाई हटाउने तयारी गरे पनि बिपक्षी दलका नेता हरु नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगाएतका दर्जनौ नेताहरुले ओलीलाई हटाउने पक्षमा छैनन्।
उनीहरुले ओलीलाई हटाउने भन्दा पनि नयाँ सरकार बन्न नदिने र चुनावमा जाने बाताबरण बनाउन खोजेका छन्। जसका लागि जसपाका नेताहरु महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगाएतका नेताहरु पनि सहमत छन्।
तर जसपाकै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगाएतका नेताहरु भने ओलीलाई हटाउने पक्षमा नै छन्। यदि महन्त ठाकुर लगाएतका नेताहरु ओलीको पक्षमा गए भने जसपा पनि फुट्ने निश्चित जस्तै छ ।
नेपाल समूहले कहाँ–कहाँ बनायो समानान्तर कमिटी
फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी ब्युताँएपछि सुरु भएको एमालेभित्रको विवाद प्रदेश र जिल्ला हुँदै तल्लो निकायसम्म पुगेको छ ।
पार्टीभित्रको खनाल–नेपाल समूह यतिबेला प्रदेश र जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाउन सक्रिय छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २८ फागुनमा खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेलगत्तै यो समूहले समानान्तर कमिटीको अभ्यास थालेको हो ।
ओलीले अध्यक्ष र महासचिवबाहेक केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, खनाल–नेपाल पक्षीय प्रदेश इन्चार्ज र विभाग प्रमुखको पनि जिम्मेवारी खोसिएको थियो ।
त्यसलगत्तै, २९ फागुनमा खनाल–नेपाल समूहले केन्द्रीय समिति बैठक डाकेर प्रदेश ईन्चार्ज तथा विभागीय प्रमुखहरुको नयाँ सुची सार्वजनिक ग¥यो । यसरी सुरु भएको समानान्तर कमिटीको अभ्यास अहिले जिल्ला–जिल्लामा ‘डढेलो झैं’ फैलिएको छ ।
चैत मसान्तसम्म प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा कमिटी निर्माण गरिसक्ने खनाल–नेपाल समूहको योजना छ । यस समूहअन्तर्गतका केही जिल्ला कमिटीहरुले मसान्तभित्र पालिका तथा वडा कमिटी गठन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
कुन–कुन जिल्लामा समानान्तर कमिटी
प्रदेश १ अन्तर्गत भोजपुर र धनकुटामा समानान्तर कमिटी गठन भइसकेको छ । बाँकी जिल्लामा पनि कमिटी बिस्तार गर्ने तयारी चलिरहेको छ । भोजपुरमा शरणकुमार राईको अध्यक्षतामा १ सय ७५ सदस्यीय कमिटी बनाइएको छ ।
त्यसैगरी धनकुटामा अर्जुन राईको अध्यक्षमा १ सय १ सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन भएको छ । बागमती प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन भइसकेको छ,
जसअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा झंक नेपाल, ललितपुरमा हरिकृष्ण थापा, नुवाकोटमा नारायण खतिवडा, काठमाडौंमा वसन्त मानन्धर, काभ्रेमा टोकबहादुर वाईवा, मकवानपुरमा मुनु सिग्देल,
चितवनमा तेजेन्द्र खड्का, धादिङमा शिवराज कंडेल, दोलखामा भीम दाहाल, सिन्धुलीमा सूर्य पाख्रिन, रसुवामा पेम्बा तामाङ, रामेछापमा शान्ति पौडेल र भक्तपुरमा राजन केसी अध्यक्ष छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत अर्घाखाँचीमा रामबहादुर चौहानको अध्यक्षतामा ७० सदस्यीय समानान्तर जिल्ला कमिटी १५ चैतमै गठन भएको थियो । समानान्तर कमिटी गठन गर्ने अर्घाखाँची पहिलो जिल्ला हो ।
बे’होश भएका बेला की’र्ते गरेर ४ करोड नगद र सुन पनि लगिछ छोरीले
ओली तिरै फर्किए यी ५ नेता, निकाले यस्तो बिज्ञप्ति !
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई मन्त्रीले ‘तिमी बच्चा छौ बुझेर आउ’ भनेर थ’र्काएपछि हं’गामा म’च्चियो (भिडियो हेर्नुस्)
February 26, 2021 February 26, 2021 Ramash Kunwar
एकैपटक नेकपाका यी नेताहरु परे का’रवाहीमा ! (नामावलीसहित)
कोरोना खोप लगाएका कांग्रेस नेता दाहालको नि’धन
February 20, 2021 Ramash Kunwar